Maxaa ka jira inay Inter Milan raadinayso Leo Messi? – Gool FM
Maxaa ka jira inay Inter Milan raadinayso Leo Messi?
(Milano) 19 Jan 2017 – Guddoomiyihii hore ee Inter Milan Massimo Moratti ayaa rumaysan in Suning ay “agaasimayaan keenista laacib wayn” balse wuxuu meesha ka saaray sheekada Lionel Messi.
Qannaaskii hore ee Nerazzurri ee Diego Milito ayaa maanta ka dhawaajiyay in madaxwayne-xigeenka Inter ee Javier Zanetti uu ”yahay qofka qura ee jookarka Barcelona keeni kara San Siro, balse badroonigii hore ayaa arrintaa u arka riyo soo jeed ah.
“Weligay ma maqlin arrinka Messi, way dhici kartaa inay saxiixyo waawayn isku dubba ridayaan, balse marna ma maqal warka laacibkan reer Argentine,” ayuu Moratti u sheegay ANSA isagoo xilligaa kasoo baxayay kulan qado ah oo uu la qaatay milkiilayaasha cusub ee Chinese-ka.
Wargeyska Marca oo 20 Funaanadood oo kooxaha H/Spain oo saxiixyo lagu qoray u dirtay kooxdii diyaaraddu la dhacday
"Waxaan u imid Sevilla si aan u garaaco Real Madrid" - Stevan Jovetic